Soraty amin'ny tranokala Mpanome Award Winning Tour ianao ao amin'ny Odisha | Calling your travel custom custom | Call @ + 91-993.702.7574
Namaskaar!... ary fiadanam-po avy amin'ny tanin'ny Tompo Jagannath.Bhubaneswar - tanànan'ny tempoly; renivohitra Odisha dia ny fireneko. Odisha, voarindra amin'ny lova ara-kolontsaina, ny lovam-pananana ara-tsakafo sy ny kavina miafina dia ny fanahin'i India. Ireo tempoly tsara tarehy, ireo mari-pamantarana malaza, ireo kirikirana mahavariana, ireo zavatra mahavariana toerana masina ary ny valan-javaboarim-pirenena, dia manintona mpitsidika maromaro foana ireo zavaboary mifindrafindra monina ao Chilika. Te-hanilika an'ity hatsaran-tarehy ity ho an'ny tontolo iray manontolo aho, ary iray amin'ireo mpandresy tsara indrindra amin'ny mpandresy ao Odisha amin'ny asa fanompoana ataonareo.
Nalaza be aho hatramin'ny fahazazako sy ny olana nahazo ahy. Izany dia nanosika ahy hampivelatra ity indostrialy ity ary hanadihady ny fahafaha-manaony izay afaka mamporisika tokoa ny mpialona na ny fanangonana mpitsidika. Ary afaka miteny amim-pireharehana isika, ao anatin'ny taona vitsivitsy, miaraka amin'ny ezaka maro sy ny asa mafy ataontsika izao isika izao no mpihazakazaka Award Winning Tour in Odisha. Izany no fomba izay nahatonga ny "Dream Child" Sand Pebbles Tour 'n' Travels (I) Pvt Ltd tonga nanam-pahazotoana. Noho ny traikefako sy ny fandraisako anjara tamin'ity orinasa ity, dia nanana ny fahafahana mamory vondrona iray tena voaomana aho ary ireo mpiasa efa za-draharaha izay handeha lavitra ny adidiny amin'ny fametrahana ny mpitsidika amin'ny traikefa goavana indrindra.
Androany dia nanaparitaka ny elatry ny elany izahay ho any New Delhi sy Kolkata ary miasa ao amin'ny metros of India amin'ny sitrapo tsara amin'ny fanampian'ny Departemantan'ny fizahantany, governemantan'i Odisha sy ny governemantan'i India. Ho mpanafatra mpizahatany any Odisha ianao, ny tanjonay lehibe indrindra dia ny manome ny traikefa mandritra ny androm-piainana, boaty feno fahatsiarovana sy tarehy faly.
Noho izany dia tiako ny manolotra fandraisana am-pirahalahiana ho an'ny tsirairay mba hitsidika ny firenena mahafinaritra sy mampiavaka antsika ary hifanena amin'ny tsy manam-petra. Ny tena andrasako dia ny ezak'ireo vahiny dia hiezaka handinika ny fanadihadiana ny toerana sy ny zavamaniry any India. Te-hanome toky anao aho fa ny traikefany dia hitohy amin'ny fahatsiarovany mandritra ny fotoana tsy voafetra.
Ny tsara indrindra ho anareo rehetra ary miandrandra anareo any Odisha.